Maxaa ka cusub wararka Lukaku la xiriirinaya kooxaha Man City, Barcelona iyo Real Madrid? – Gool FM
Maxaa ka cusub wararka Lukaku la xiriirinaya kooxaha Man City, Barcelona iyo Real Madrid?
Dajiye March 29, 2021
(Milano) 29 Maarso 2021. Wargeysyada Ingariiska ayaa shaaca ka qaaday go’aamada xiddiga reer Belguim iyo kooxda Inter Milan ee Romelu Lukaku, kaddib markii la helay warar badan oo ay saxaafadu qortay labadii maalmood ee la soo dhaafay.
Romelu Lukaku ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo kooxda Inter Milan xilli ciyaareedka soo socda sababo la xiriira inay xiiseynayaan adeegiisa kooxaha Manchester City, Barcelona iyo Real Madrid.
Wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa muujiyay in Lukaku uusan ka tagi doonin safka Nerazzurri, inta uu kooxda tabbare ka yahay Antonio Conte.
Qandaraaska uu Romelu Lukaku ku joogo kooxda Inter Milan ayaa wuxuu gaarayaa ilaa iyo 2024, waxayna wararku tilmaamayaan in maamulka kooxda reer talyaani ay doonayaan inay qandaraas waqti dheer ay saxiixdaan xiddiga reer Belguim.
Xilli ciyaareedkaan, Lukaku wuxuu kooxdiisa u dhaliyay 25 gool oo tartamada dhan ah isagoo ku hoggaamiyay inay hoggaanka u qabtaan kala sareynta horyaalka Talyaaniga.
Barcelona iyo Juventus oo qorsheynaya inay sameeyaan heshiis weyn oo ay isku dhaafsanayaan labo xiddig muhiim ah